Budata Zemana Antivirus APK maka Android
Budata Zemana Antivirus
Budata Zemana Antivirus,
Zemana Antivirus bụ ngwa antivirus dị elu ewepụtara maka ndị ọrụ ekwentị gam akporo. Ị nwere ike ibudata ụdị ọhụrụ nke Zemana Antivirus 2021, ihe mgbochi spyware na ngwa nchekwa ịntanetị, na ama gị site na Softmedal, ị nwere ike chekwaa ngwaọrụ mkpanaka gị ozugbo megide malware, nje, keyloggers, trojans na egwu ndị ọzọ dị nịntanetị. Ma ị na -etinye ngwa na egwuregwu Android site na Google Play ma ọ bụ na saịtị nbudata APK, Zemana Antivirus, mmemme nchekwa kachasị ọsọ na nke kachasị maka ngwaọrụ gam akporo, kwesịrị ịdị na ekwentị gị.
Zemana Antivirus, nke nwere ngwa dị mfe yana ọgbara ọhụrụ nke ndị ọrụ ekwentị gam akporo ọhụrụ nwere ike iji mee ihe ngwa ngwa, bụ ngwa antivirus nke AVTEST nwalere ma kwado ya, ụlọ ọrụ nnwale nọmba 1, ị nwere ike budata ma jiri ya maka nefu. Agbanyeghị na ọ bụ nefu, ngwa Android, nke na -adọta uche ya na nyocha ya ngwa ngwa ugboro ise, wepụ adware, igbochi malware na weebụsaịtị, ịchọpụta keyloggers na ọtụtụ ndị ọzọ, na -abịa na nkwado asụsụ Turkey.
Njirimara Nchedo Weebụ: Na -echebe gị pụọ na weebụsaịtị ọjọọ.
Nchedo Oge: Na-enyocha ngwa ọhụrụ arụnyere na akpaghị aka. Ịkwesighi ịmalite nyocha nyocha. A na -echebe ekwentị gam akporo gị 24/7 megide nje, malware, trojans, spyware, adware, keyloggers na ihe iyi egwu ndị ọzọ.
Mmelite nchekwa data akpaaka: Na -edobe ekwentị gam akporo gị na nchekwa data iyi egwu emelitere iji chebe gị pụọ nihe egwu nchekwa kachasị ọhụrụ.
Nchedo Anti-Keylogger: Chọpụta ma gbochie ngwa igodo ọjọọ, ndị njikwa okwuntughe na ngwa SMS nwere ike soro ihe niile ị pịnyere.
Nkwado teknụzụ 24/7: Echegbula. Ọ bụrụ na ị hụ ihe iyi egwu nke ị na -enweghị ike iwepu, ndị otu Zemana ga -ejikọ na ngwaọrụ gam akporo gị wee jiri aka wepu malware.
Ihe nhicha Antivirus: Jiri igwe nyocha igwe ojii ọhụụ na -eme ka ngwaọrụ gam akporo gị ghara inwe nje.
Enwere ike ibudata Zemana Antivirus na Nchekwa nefu. Na-eme nyocha ngwa ngwa kachasị dị irè maka ekwentị gam akporo, Zemana Antivirus na-enyekwa nhọrọ kacha mma yana atụmatụ ndị ọzọ maka ndị ọrụ chọrọ nchebe dị elu.
Zemana Antivirus Ụdịdị
Mmepụta: Zemana Ltd.
Mkpokọta VPN bụ otu nime ngwa VPN ịchọrọ ịgagharị ịntanetị na ekwentị gam akporo gị na mbadamba gị...
Chọgharịa Ịntanetị na nzuzo na nzuzo. Jiri njikọ dị ngwa na kwụsie ike chebe nzuzo gị nịntanetị....